गिलास तेल बर्नर टाउको सानो कटोरा 60 मिमी लम्बाइ | ड्रेगन हेड पसल
घर → उत्पादन → स्पष्ट घुमावदार गिलास तेल बर्नर पाइप 60mm लम्बाइ 10mm पुरुष संयुक्त
ड्रेगन हेड पसल
पूर्वनिर्धारित शीर्षक - £ १२.०० GBP
सबै भन्दा राम्रो बेच्ने घुमावदार तेल बर्नर गिलास पाइप/s- बेंड/हंस-गर्दन/bong टाउको/हुक/बर्नर टाउको
बर्नर टाउको समग्र लम्बाई 60mm
बर्नर टाउको को वजन 10g
सामाग्री: उच्च गुणवत्ता borosilicate गिलास
बर्नर टाउको को लागी सबै मापन अनुमानित छन्
एक borosilicate गिलास कम्पैक्ट तेल बर्नर पाइप Pyrex बाट बनेको छ, जो सामान्य गिलास को तुलना मा तीन गुना बलियो छ। यो तेल बर्नर पाइप पुदीना, spearmint, दालचीनी, नीलगिरी र अधिक जस्तै आवश्यक तेल धूम्रपान को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाइँ पनी पानी राख्न सक्नुहुन्छ तपाइँको आवश्यक तेलहरु को तापमान लाई राम्रो लाभ को लागी जब तपाइँ आफ्नो गन्ध मा सास फेर्न को लागी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक १०mm पुरुष जडान छ त्यसैले यो धेरै बहुमुखी छ र अन्य टुक्राहरु संग तपाइँ पहिले नै स्वामित्व पाउन सक्नुहुन्छ संग काम गर्दछ।
हाम्रो अन्य संग्रह जाँच गर्नुहोस्; गिलास पाइप, बोंग, बोंग टाउको, जेट लाइटर र सामान तपाइँको महान मूल्य बोंग टाउको संग जान को लागी।
हामीले बेच्ने सबै उत्पादनहरु मात्र कानूनी, तंबाकू, निकोटीन वा CBD उत्पादनहरु संग प्रयोग गर्न को लागी मात्र हो। तंबाकू र निकोटीन तपाइँको स्वास्थ्य को लागी हानिकारक हुन जानिन्छ; तपाइँ सधैं जिम्मेवार धूम्रपान गर्नुपर्छ। यदि तपाइँ धूम्रपान रोक्न मा मद्दत चाहिन्छ तपाइँ पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ NHS धूम्रपान वेबसाइट छोड्नुहोस् जो तपाइँ धूम्रपान रोक्न मद्दत को लागी तरिका को एक दायरा प्रदान गर्दछ
EU ग्राहकहरु लाई नोट गर्नुहोस्
नयाँ नियम अन्तर्गत ईयू को सामान निर्यात गर्ने गैर ईयू कम्पनीहरु लाई orders १५० को मुनि सबै अर्डर मा ईयू को लागी भ्याट स collect्कलन गर्न भनिएको छ। हामी यूके मा अझै सम्म दर्ता भ्याट छैनौं र तपाइँको भ्याट स collect्कलन गर्ने एउटा तरीका खोज्न को लागी कोशिश गरीरहेछौं कि तपाइँ कुनै पनि आदेश संगै एक भ्याट बिल पाउनुहुन्न। हाल हामीलाई सल्लाह दिईएको छ कि हामी अरु केहि गर्न सक्दैनौं हाम्रो सामान DDU वा वितरण शुल्क तिर्न बाहेक अरु गर्न सक्दैनौं। यो तपाइँ कुनै पनि VAT वा आयात शुल्क को लागी ग्राहक लाई उत्तरदायी बनाउनुहुनेछ। हामीलाई आश्वासन दिइएको छ कि समाधान "चाँडै" आउँदैछ ... हामी मात्र तपाइँसंग सामना गर्न सक्ने सम्भावित VAT शुल्कहरु को बारे मा खुला र ईमानदार हुन चाहन्छौं।
ज्याक्सन (लन्डन, जीबी)
किनमेल नगर्नुहोस् जब तपाइँ आधा बाटो। क्रम मा लेख्न को आकार lol राख्नुहोस्
M. (हेमेल हेम्पस्टेड, जीबी)
पैसा को लागी उत्कृष्ट मूल्य। छिटो प्रेषण र राम्रो तरिकाले प्याक र संरक्षित आइटम। म यो आपूर्तिकर्ता संग साँच्चै प्रभावित छु। उनीहरुको सेवा सबै भन्दा राम्रो छ! अन्यत्र किन हेर्ने?
ग्राहक (मेडेनहेड, जीबी)
राम्रो गुणस्तर र छिटो वितरण।
मसँग केहि दिन भित्र उत्पादन थियो।
प्रतिक्रिया को लागी धन्यवाद।
मलाई के चाहियो
कुनै समय मा कुनै मुद्दाहरु संग समय मा मेरो आदेश प्राप्त, यो विक्रेता सिफारिश गर्न खुसी: लाली: